Fitsapana ny riva an'ny antigen SARS-CoV-2 - Fitsapana Covid 19- BALLYA
Posted on Febroary 20, 2021, Nataon'i Jason, Sokajy 19 taona
1. Fampiasana ny fitsapana haingana an'ny SARS-CoV-2 Antigen Rapid
2. TORO LALAN'NY
3. Ireo mpiorina amin'ny fitsapana haingana an'ny SARS-CoV-2 Antigen
4. FITAOVANA VOLA
5. Ilaina ny materialy fa tsy omena
6. FAMPITANDREMANA SY FITORIANA
7. FITONDRANA SY FIAINAN'NY BATO Aorian'ny fisokafana voalohany
8. FANANANANA SAMPELA PRIMARY, TANANA SY FITONDRANA
9. Fomba fitsapana ny fitsapana haingana an'ny SARS-CoV-2 Antigen
10. INTERPRETATION ny valiny
11. Fomba fiasa mifehy
13. TOETRA FAMPANDROSOANA
14. BAIBOLY LITERATURA
Fampiasana ny fitsapana haingana an'ny SARS-CoV-2 Antigen Rapid
The Fitsapana ny rora an'ny antigen SARS-CoV-2 dia ampiasaina amin'ny famaritana kalitao antigen coronavirus (SARS-CoV-2) antigen amin'ny santionan'ny rora, raha tsy amin'ny fampiasana diagnostika vitro.
Ireo novakin'ny coronavirus dia an'ny β genus. SARS-CoV-2 dia areti-mifindra mahery vaika. Mora tohina ny olona amin'ny ankapobeny. Amin'izao fotoana izao, ireo marary voan'ny virus coronavirus no loharanon'ny aretina; ny olona voan'ny asymptomatika dia mety hiteraka loharano mifindra koa. Miorina amin'ny fanadihadiana momba ny epidemiolojika ankehitriny, ny vanim-potoana fampidirana zaza dia 1 ka hatramin'ny 14 andro, ny ankamaroany dia 3 ka hatramin'ny 7 andro. Ny tena fisehoana dia ny tazo, havizanana ary kohaka maina. Ny fitohanana eo amin'ny orona, ny orona, ny tenda, ny myalgia ary ny fivalanana dia hita amina tranga vitsivitsy.
Ity kit ity dia mifototra amin'ny fitsipiky ny fiasan'ny antody-antigen tena manokana sy ny fanoratana volamena koloidal famakafakana immunochromatographic teknolojia.
Ny reagent dia misy antibody monoclonal SARS-CoV-2 namboarina tao amin'ny faritra fanandramana (T) eo amin'ny membrane sy ny antibody monoclonal SARS-CoV-2 nopetahana tamin'ny fifangaroan'ny volamena pad-colloidal.
Ny santionany dia atsofoka ao anaty santionany ary mihetsika miaraka amin'ny antibody monoclonal SARS-CoV-2 izay mifamatotra amin'ireo sombin-boloky koloidia efa voarohy rehefa mitsapa.
Avy eo ny fifangaroana dia chromatographed ambony miaraka amin'ny capillary effects. Raha tsara izy io, ny antibody mitondra ny marika kôlôla volamena dia hifamatotra voalohany amin'ny viriosy SARS-CoV-2 amin'ny santionany mandritra ny chromatography.
Avy eo ny conjugates dia voafatotry ny antibody monoclonal SARS-CoV-2 miorina amin'ny membrane, ary misy tsipika mena hita eo amin'ny faritra andrana (T). Raha ratsy dia tsy misy tsipika mena eo amin'ny faritra andrana (T).
Na misy antigèra SARS-CoV-2 na tsia ilay santionany dia misy tsipika mena hiseho eo amin'ny faritra fanaraha-maso kalitao (C). Ny tsipika mena miseho ao amin'ny faritra fanaraha-maso kalitao (C) no fenitra hitsarana raha toa ka misy ny santionany ary raha ara-dalàna ny fizotran'ny chromatographic, ary izy io koa dia ampiasaina ho fifehezana anatiny ho an'ny reagent.
Ireo mpiorina amin'ny fitsapana haingana an'ny SARS-CoV-2 Antigen
Ireo singa amin'ny tsipika fitsapana ao anaty kasety:
Santionany pad: misy sira sy detergents buffered. Label pad: misy totozy misy marika volamena manohitra ny SARS-CoV-2.
Faritra fanaraha-maso: misy antibody sy buffer polygonal IgG anti-totozy. Faritra fitsapana: misy antibody monoplonal sy buffer anti-SARS-CoV-2. Pad absorbent: vita amin'ny taratasy mpitroka be.
Ny paosy iray dia misy kasety fitsapana sy desiccant. Ny desiccant dia ho an'ny fitehirizana ihany ary tsy ampiasaina amin'ny fizotran'ny fitsapana. 2. buffer fitrandrahana santionany: 1/2/3/5/20/25 pc (s)
Kaopy plastika: 1/2/3/5/20/25 pc (s)
Pipette dropper: 1/2/3/5/20/25 pc (s)
Fantsom-pifandraisana: 1/2/3/5/20/25 pc (s)
1 Kitapo atsofoka
Ilaina ny materialy fa tsy omena
Famantaranandro na Timer
Ity vokatra ity dia reagent diagnostika tokana ampiasaina amin'ny vitro. Aza ampiasaina indray. Aza ampiasaina raha efa lany daty.
Ny singa tsirairay amin'ny kit dia tsy azo ampiasaina amin'ny andiany.
Ny valiny tsara azo tamin'ny fampiasana ity kit ity dia mila fanamafisana bebe kokoa amin'ny fomba hafa.
Ny mari-pana be loatra amin'ny tontolo andrana dia tokony hialana. Ny hafanan'ny fihenam-bidy dia tokony ho 10 ~ 30 ℃, ary ny hamandoana dia tokony ho latsaky ny 60%. Ny kasety fanandramana voatahiry amin'ny mari-pana ambany dia tokony hampifanarahina amin'ny hafanan'ny efitrano alohan'ny hisokafana mba hisorohana ny fidiran'ny hamandoana.
Ny hamafin'ny lokon'ny tsipika fitsapana dia tsy voatery mifandray amin'ny
ny fifantohan'ny antigen ao anaty santionany, ary ny valiny adika aorian'ny 15 minitra dia tsy mety.
Manoro hevitra anao ny hampiasa santionany vaovao, aza mampiasa santionany miovaova be loatra.
Sorohy ny fandotoana ny santionan'ny rora amin'ny alàlan'ny fampiasana kaopy plastika sy solika pipeta vaovao isaky ny santionan'ny rora.
Ireo singa ao amin'ny kit sy ny fako vokarin'ny andrana dia raisina ho toy ny loto maloto.
Ho an'ny referansa klinika fotsiny, ary tsy azo ampiasaina ho fototra hanamafisana na hanilihana tranga irery.
FITONDRANA SY FIAINAN'NY BATO Aorian'ny fisokafana voalohany
Tehirizo amin'ny 2 ℃ ka hatramin'ny 30 ℃ ao anaty paosy voaisy tombo-kase hatramin'ny daty farany (24 volana).
Halaviro ny tara-masoandro, ny hamandoana ary ny hafanana.
Rehefa latsaka ny 60% ny hamandoana dia ampiasao ao anatin'ny adiny 1 aorian'ny fisokafany. Rehefa mihoatra ny 60% ny hamandoana dia ampiasao avy hatrany aorian'ny fisokafana. Ny daty famokarana, ny daty famaranana dia ho ao amin'ny marika
FANANANANA SAMPELA PRIMARY, TANANA SY FITONDRANA
Apetraho eo amin'ny valanoranonao ambony ny lelanao ary aondriho ny lohanao mba hamelana ny rora hivoaka ao anaty kaopy plastika azo ovaina.
Mampiasà menaka mitete hamindra 0.5 ~ 1 ml rora avy amin'ny kaopy plastika mankany amin'ny fantsom-pifandraisana.
Ny santionan'ny rora dia azo tehirizina amin'ny 2-8 ℃ mandritry ny 48 ora alohan'ny fitsapana. Ho an'ny fitehirizana maharitra, ny specimens dia mety ho voatazona ary tehirizina etsy ambany -20 ℃. Ny santionany be sandry dia tokony hosotroina ary afangaro alohan'ny fitsapana.
Fomba fitsapana ny fitsapana haingana an'ny SARS-CoV-2 Antigen
Esory ny fonon'ny buffer fitrandrahana. Ampio ny buffer fitrandrahana rehetra ao anaty fantsom-pifandraisana misy santionan'ny rora 0.5 ~ 1mL.
mifohaza tsara, ary tazomy ny rora mandritra ny 1 minitra.
Ahintsano indray ny fantsom-pifandraisana alohan'ny hanaovana ilay fitsapana.
Ento ny santionany, kitapo fanadinana ary fanaraha-maso hafa handanjalanjana ny mari-pana amin'ny efitrano alohan'ny fitsapana.
Manokatra paosy misy kasety fitsapana. Apetraho eo amin'ny faritra maina sy marindrano ny kasety fanandramana.
Tazomy mitsivalana ilay tsiranoka ary afindrao ny santionany rora 3 milatsaka amin'ny faran'ny santionan'ny kasety fanandramana.
Jereo ny valiny naseho tao anatin'ny 10-15 minitra, ary ny valiny dia naseho taorian'ny 15 minitra tsy misy dikany ara-pahasalamana.
ratsy: Tsipika mena ihany no hita ao amin'ny faritra fanaraha-maso kalitao (C), ary tsy misy tsipika mipoitra ao amin'ny faritra andrana (T).
tsara: Tsipika mena roa no miseho. Ny iray dia eo amin'ny faritra andrana (T) ary ny iray hafa dia eo amin'ny faritra fanaraha-maso kalitao (C).
Tsy mety: Tsy misy tsipika mena aseho ao amin'ny faritra fanaraha-maso kalitao (C). Midika izany fa niharatsy na simba ny fandidiana diso na ny cassette fitsapana. Avereno kitapo vaovao ny fitsapana. Raha maharitra ny olana dia ajanony avy hatrany ny fampiasana io laharana lotera io ary mifandraisa amin'ny mpamatsy anao eo an-toerana.
Fanamarihana: ny santionany tsy mety dia tokony horaisina ho toy ny loto mandoto, ary ny santionany dia tokony hangonina indray.
Fomba fiasa mifehy
Ny kitapo fanandramana dia manana mari-pamantarana kalitao natsangana. Taorian'ny fanatanterahana ny fitsapana ary tsy misy tsipika ao amin'ny faritra Control (C) amin'ny membrane reaction dia hita, ny santionany dia tsy nampiana tsara na mety niharatsy ny fitsapana.
Ity kit ity dia tsy hahitana ny antigèra SARS-CoV-2 amin'ny roran'olombelona.
Ny maha-marina ny fitsapana dia miankina amin'ny fanangonana santionany, fizarana, fitahirizana ary fomba fiasa. Ny fanangonana santionany tsy mety, ny fitehirizana santionany tsy marina, ny santionany tsy madio, na ny santionany santionany miverimberina be loatra dia hisy fiantraikany amin'ny valin'ny fitsapana.
Ny cassette fitsapana dia tsy manome afa-tsy ny fahitana kalitao an'ny SARS-COV-2 ao amin'ilay santionany. Raha mila mamantatra ny atiny manokana amin'ny mari-pamantarana ianao dia ampiasao azafady ireo fitaovana matihanina mifandraika amin'izany.
Ny valin'ny fitsapana an'ity kitapo ity dia ho an'ny fitsaboana klinika ihany ary tsy tokony hampiasaina ho fototry ny aretina sy fitsaboana klinika fotsiny. Ny fitantanana klinika ny marary dia tokony hodinihina miaraka amin'ireo soritr'aretina / famantarana, tantaram-pitsaboana, fitsapana amin'ny laboratoara hafa, ary ny valin'ny fitsaboana.
Noho ny fetran'ny fomban'ny réagents detigion antigen, ny fahatsapana an-tsaina azy dia mazàna ambany noho ny an'ny reagents asidra nukôlika. Noho izany, ny mpikaroka dia tokony handinika bebe kokoa ny valiny ratsy ary mila manapa-kevitra feno miaraka amin'ny valin'ny fitsapana hafa. Manolo-kevitra ny handinihana ireo vokatra ratsy mampiahiahy amin'ny alàlan'ny fikarohana ny asidra nukleika na ny fomba famantarana ny kolontsaina virus.
Fanadihadiana ny mety hisian'ny valiny ratsy diso:
Ny fanangonana santionany tsy mitombina, ny fitaterana sy ny fanodinana ary ny fatrany ambany loatra amin'ireo zavatra voasedra amin'ny santionany dia mety hitarika vokatra ratsy diso.
Ny fiovan'ny fototarazon'ny virus dia mety hiteraka fiovan'ny antigenika, izay mety hiteraka valiny ratsy. Azo inoana kokoa ny hitranga amin'ny alàlan'ny fampiasana rezim-piadiana amin'ny antibody monoclonal.
Ny karazana santionany sy ny fotoana anaovana santionany (titer virus avo indrindra) aorian'ny aretina dia tsy voamarina, noho izany ny fanangonana santionany amin'ny ampahany, amin'ny faritra maro amin'ny marary iray dia mety hisoroka ny vokatra ratsy diso.
Fanadihadiana momba ny fahatsapana sy fahaiza-miavaka
Ny famaritana ireo vokatra momba ny fahatsapana antigène 3 SARS-CoV-2 (S1, S2, S3), ary ny valiny dia tsara ho an'ny S1; tsara na ratsy ho an'ny S2; ratsy ho an'ny S3. Ny fahitana ny vokatra azo avy amin'ny orinasa antra 5 SARS-CoV-2, ary ny vokatra dia tsara avokoa.
Ny fahitana ny vokatra azo avy amin'ny orinasa antra 5 SARS-CoV-2, ary ny vokany dia ratsy.
Ny SARS-CoV-2 Antigen Saliva Test Kit (Colloidal Gold) dia tsy naneho fihetsika miampita miaraka amin'ny santionany tsara: coronavirus olona endemika (HKU1, OC43, NL63,229E), virus gripa A, virus gripa B, virus virtoaly syncytial, rhinovirus, adenovirus , enterovirus, Virus EB, Virus Measles, cytomegalovirus olombelona, ​​Rotavirus, Norovirus, virus Mumps, virus varicella-zoster, virus virus parainfluenza type II, Mycoplasma pneumoniae, ary tsy latsaky ny 100 ny santionan'ny rora fahasalamana.
Famerimberenana sy fiterahana.
Ny valim-panadinana dia naneho valiny tsara tamin'ny santionany tsara rehetra ary naneho valiny ratsy tamin'ny santionany ratsy. Tsy nisy fahasamihafana lehibe hita tamin'io santionany io ihany tamin'ny fitsapana imbetsaka ny fitsapana 10 tamin'ny andiany iray ihany. Tsy nisy fiovan'ny intra sy inter be dia be hita teo amin'ireo fitsapana isan-karazany, isaky ny be dia be, mpandraharaha samihafa tamin'ny toerana fitsapana samihafa tamin'ny fotoana samihafa ho an'ilay santionany.
Ny valiny dia naneho fa ny famerimberenana sy ny famerenan'ny SARS CoV-2 Antigen Saliva Test Kit dia mahafa-po.
To, KK-W. et al. Famantarana tsy tapaka ny Coronaavirus Novel 2019 ao anaty rora. Clin. Areti-mifindra. Dis. (2020) doi: 10.1093 / cid / ciaa149.
Kim, Y.-G. et al. Fampitahana misy ny roroka sy ny lozisialy Swab Nasopharyngeal ho an'ny fitiliana ireo viriosy manahirana amin'ny alàlan'ny Multiplex Reverse Transcription-PCR. J. Clin. Microbiol. 55, 226–233 (2017).
Wei YQ, Duan YC, Bi YH, et al. Fanandramana vaovao momba ny fikorontanana mikraoba nanoparticle miorina amin'ny fikarohana momba ny viriosy Ebola. Chin J Biotech, 2018, 34 (12): 2025–2034.
Fitsapana Antigen Covid 19 , COVID-19 IgG / IgM Fitsapana haingana